Semalt no mamaritra Plugins WordPress mila mametaka ny tranonkalanao
Plugin iray amin'ny WordPress dia rindrambaiko misy karazany maromaro izay ampiasaina hanohanana tranokala WordPress. Ny Plugins Wordpress dia afaka manampy na manitatra ireo endri-javatra vaovao na manitatra ny vohikala amin'ny tranonkala. Azon'izy ireo atao koa ny mampifanaraka amin'ireo karazana WordPress sasany tahaka ny bilaogy, tranonkala manokana na tranokala Woo Commerce. Na izany aza, tsy ny plugins rehetra dia mahasoa sy mendrika ny fametrahana ao amin'ny tranokala WordPress.
Ryan Johnson, manam-pahaizana matihanina amin'ny Semalt , dia mamaritra ny sasany amin'ireo plugins tena ilaina ho anao.
Karazana WordPress plugin izany izay afaka manangana miaraka amin'ny fikirakirana kely. Manomboka amin'ny fisintonana izay ahafahan'ny tranonkala mandefa haingana araka izay tratra. Ny tranokala Fast loading dia manintona kokoa ny fifamoivoizanao ao amin'ny tranonkalanao. Ny WP Rocket dia ahitana ny fametrahana haingana, navigateur ary ny tranokala fitadiavana, famandrihana sitemap, fanatsarana ny tambajotra, fifanarahana marobe, CloudFlare compatibility, fifanarahana amin'ny fiteny maro, mpandrindra fanatanjahan-tena sy e-commerce..
Ity WordPress plugin ity dia manampy anao hamorona endrika mahasoa izay manasa, manampy ny olona hifandray aminao manokana amin'ny mailakao. Tafika sy rongony izany. Noho izany, manilika sy manodina ny asa tianao ianao, angamba ny menu-drop-down, ao amin'ny endrika. Azo atao koa ny môdely efa vita. Ny fonosana WPForm dia ahitana ny fananganana tranokala fananganana, famelabelarana ny finday mifandray amin'ny finday, ny endrika endrika, ny fampandrenesana tsy tapaka, ny fidirana amin'ny fidirana, ny fiarovana ny spam, ny angon-drakitra sy ny fanampim-panazavana toy ny Paypal Add-on, stripe Add-on, zapier Add-on, sonia Fanampiana eo amin'ny samy hafa.
WPBakery dia mpanamboatra pejy tsara tarehy izay miditra sy manohana ireo Plugins hafa. Amin'ny alalan'ity plugin WordPress ity dia afaka manorina haingana ny layout tianao ianao ao amin'ny tranonkalanao miaraka amin'ny fanampian'ny dragging and drop builder. Azo ampiasaina amin'ny Woommerce izany ary ny SEO namana dia azo ampiasaina amin'ny toerana marobe. Ny endri-tsoratra dia mifototra amin'ny adiresy mifototra amin'ny adiresy, lahatahiry mivantana, lohamilina amin'ny endriny ary ny backend, fanohanana amin'ny endri-tsoratra, sary filtre eo amin'ny hafa Source .